विवाह के हो ? - विवाह - प्रकाशितः मंसिर ६, २०७३ - नारी
विवाह के हो ?
मंसिर ६, २०७३
रेलिजा श्रेष्ठ, अभिनेतृ, बिजुली मेसिन
विवाह दुई मानिसबीचको समझदारी तथा सौहार्दपूर्ण तरिकाले जीवन बिताउन प्रण गर्ने संस्था हो । यसमा केवल दुई जना मात्र होइन दुई परिवारको सम्बन्ध हुन्छ ।
अविवाहित हुनुहुन्छ, विवाहपछि जीवन कस्तो होला ?
राम्रो जीवनसाथी र राम्रो परिवार छनोट गर्न सके उत्तम होला तर हडबडमा कुरा नबुझी आफूसँग मेल नखाने जीवनसाथी रोज्दा जीवन नर्क बन्नसक्छ । मलाई थाहा छ, विवाहपछि मेरो स्वतन्त्रता केही हदसम्म हनन हुन्छ । अहिले म आफ्नो विषयमा मात्र चिन्तन गर्छु भने विवाहपछि हाम्रो भनी चिन्तन गर्नुपर्छ । सन्तान भएपछि त अझ पाइला–पाइलामा सम्झौता गर्ने स्थिति आउला ।
विवाहित महिलाप्रति तपाईंको धारणा कस्तो छ ?
म विवाहित महिलाहरूलाई स्याल्युट गर्छु । अहिलेका महिलाहरू घरको चौघेरामा मात्र सीमित छैनन् । आफ्नो व्यक्तिगत जीवन, कर्मथलो, सामाजिक जीवन एवं परिवारमा भूमिका निर्वाह गरिरहेका महिलाहरू प्रशंसनीय छन् । कतिपय ठाउँमा त्यसको कदर नभएको देख्दा भने दु:ख लाग्छ ।
विदेशमा जस्तो नेपालमा पनि डिभोर्स गर्ने परिपाटी बढेको छ, किन होला ?
यसका विविध कारण छन् । महिलाहरू बिस्तारै सचेत अनि सशक्त हुँदैछन् जसले गर्दा उनीहरू आत्मसम्मानको रक्षा गर्न चाहन्छन् । उनीहरू सकेसम्म डग्न चाहँदैनन् । मन नमिलेर सदैव निराशामा बाँच्नुभन्दा अलग रहेर खुसी भइन्छ भन्ने सोचले डिभोर्स बढिरहेको छ ।
डिभोर्सको दर कम गर्न के गर्नुपर्ला ?
यो कुरा सचेतनामा भर पर्छ । जबसम्म नेपालको पारिवारिक संचरना तथा पुरातन सोचमा परिवर्तन आउँदैन तबसम्म यो कम हुन सक्दैन । पुरानो पुस्ताले नयाँ पुस्तालाई आफ्नो ढर्रा तथा शैलीमा ढाल्न खोज्नु हुँदैन ।
जीवनसाथी कस्तो छनोट गर्ने योजना छ ?
म आफू जस्ती छु त्यही स्तरको जीवनसाथी छनोट गर्छु, जसले मेरो चाहना तथा भावना बुझोस् । म उसको परिवार पनि विचार गर्छु । विवाह जीवनको महत्वपूर्ण निर्णय भएकाले आफू पूर्णरूपमा तयार भएपछि मात्र विवाह गर्छु ।
मंसिर ८, २०७३ - विवाह के हो ?
मंसिर ७, २०७३ - विवाह के हो ?
मंसिर ५, २०७३ - विवाह जीवनको महत्वपूर्ण संस्कार हो
मंसिर ४, २०७३ - अन्तर्जातीय विवाह
मंसिर १, २०७३ - विवाह सामाजिक सम्बन्ध
श्रावण ३०, २०७३ - विवाहपछिको पढाइले ल्याएको खुसी
थप केही विवाहबाट
बेहुलाका लागि स्टाइलिङ टिप्स मंसिर ८, २०७४
विवाहको व्यवस्थापनका लागि के–के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ? माघ १२, २०७३
विवाह के हो ? मंसिर ८, २०७३
विवाह के हो ? मंसिर ७, २०७३
एक्लै बसेका महिलाहरू सफल भएका उदाहरण प्रशस्तै छन् मंसिर ६, २०७३
विवाह जीवनको महत्वपूर्ण संस्कार हो मंसिर ५, २०७३